Nhau - Peipi PE inokodzera kunyorera mvura inonwa?
PPR Chigadziko Welding Machine
PPR Chigadziko Welding Chishandiswa
Manual Chigadziko Welding Machine
Chinyorwa Garo Fusion Machine
Pe garo Fusion Machine
Arched Surface Anocheka
CNC otomatiki garo Welding Machine
Full-otomatiki Fitting Welding Machine
Yakazara-Otomatiki Chigaro Fusion Machine
Hydraulic Garo Fusion Machine
Multi-Angle Kucheka Muchina
Pipe PE inokodzera kunyorera mvura inonwa?
Polyethylene pombi masisitimu ave achishandiswa nevatengi vedu kunwa mvura kubva pakuunzwa kwavo muma1950. Indasitiri yepurasitiki yatora mutoro mukuru mukuona kuti zvigadzirwa zvinoshandiswa hazvikanganise mhando yemvura.
Rudzi rweyedzo inoitwa pamapombi ePE kazhinji inovhara kuravira, hwema, kutaridzika kwemvura, uye bvunzo dzekukura kwemvura diki-diki. Uhu hwakawanda huwandu hweyedzo kupfuura hwazvino kuiswa kune echinyakare pombi zvigadzirwa, senge simbi uye samende uye simende zvigadzirwa zvine mutsetse, munyika zhinji dzeEurope. Nekudaro pane chivimbo chakakura chekuti PE pombi inogona kushandiswa pakupa mvura inonaya pasi pemamiriro mazhinji ekushanda.
Iko kune kumwe kusiana mumitemo yenyika yakadaro uye nzira dzekuyedza dzinoshandiswa pakati penyika dziri muEurope. Kubvumidzwa kwekunwa mvura yekunwa kwakapihwa munyika dzese. Kubvumidzwa kwemitumbi inotevera kunozivikanwa mune dzimwe nyika dzeEurope uye dzimwe nguva zvakanyanya pasirese:
UK Kunwa Mvura Inotarisa (DWI)
Germany Deutsche Verein des Gasi- und Wasserfaches (DVGW)
USA Nyika yeNational Sanitary Foundation (NSF)
PE100 pombi dzemakomputa dzinofanirwa kugadzirwa kuti zvishandiswe mukushandisa kwemvura yekunwa. Zvakare PE100 pombi inogona kugadzirwa kubva kune yebhuruu kana nhema dema ine mitsetse yebhuruu ichiratidza kuti yakakodzera kushandiswa mumashandiro emvura anonwa.
Rumwe ruzivo nezve kubvumidzwa kwemvura yekunwa inokwanisa kuwanikwa kubva kumugadziri wepombi kana zvichidikanwa.
Kuti uwirirane nemirau uye nekuona kuti zvese zvinoshandiswa mukubata nemvura yekunwa zvinorapwa nenzira imwecheteyo, iyo EAS European Approval Scheme iri kuvandudzwa, zvichibva kuEuropean Commission
UK Kunwa Mvura Inspectorate (DWI)
Jerimani Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW)
Netharenzi KIWA NV
Furanzi CRECEP Center de Recherche, d'Expertise et de
Kutungamira 98/83 / EC. Izvi zviri kutarisirwa neboka reEuropean Water Regulators, RG-CPDW - Regulators Boka reZvakagadzirwa Zvigadzirwa mukubatana neMvura yekunwa. Izvo zvinotarisirwa kuti iyo EAS ichatanga kushanda muna 2006 mune yakaganhurirwa fomu, asi zvinoita kunge zvisingaite kuti inogona kuzadzikiswa zvizere kudzamara rakazotevera rakazotevera zuva apo nzira dzekuyedza dziri munzvimbo yezvinhu zvese.
Mapombi epurasitiki emvura yekunwa anoedzwa zvakaomarara neimwe nhengo yeEU Nhengo. Sangano revatengi vezvinhu zvakasvibirira (Plastics Europe) rakagara richikurudzira kushandisa mapurasitiki ekubata chikafu pakunyorera mvura yekunwa, nekuti mitemo inosangana nechikafu ndiyo yakaoma kwazvo kuchengetedza hutano hwevatengi uye kushandisa ongororo dzechepfu sezvinodiwa mumirairo yeEuropean Commission's Scientific Committee. Zvekudya (rimwe remakomiti eEU Chikafu Chemitengo). Denmark, semuenzaniso, inoshandisa mutemo wekubata chikafu uye inoshandisa imwe yekuchengetedza nzira Iyo Danish yemvura yekunwa standard ndiyo imwe yeanotambudzika kwazvo muEurope.
Adress: Kwete. 228 Huisheng Road, Fenghua, Ningbo
MAZANO OKUWEDZERA THERMOPLASTICS
Welding ndiyo nzira yekubatanidza surfac ...
Pe pombi yakakodzera mvura yekunwa yemvura ...
Polyethylene Mapaipi nehurongwa vanga U ...